Совет Федерации скорректировал порядок применения пестицидов и агрохимикатов — Картофельная Система
Sawir waxaa leh Svetlana Novozhilova
Kulankiisii ​​487-aad, Golaha Federaalku wuxuu ku ansixiyay wax ka badal lagu sameeyo Sharciga Federaalka "ee ku saabsan Waxkaqabashada Nabdoon ee Sunta Cayayaanka iyo Waxyaabaha Beeraha ah" iyo Sharciga "Shuruucda Gobolka ee Xaqiijinta Awoodaha Dhul beereed" marka la eego wanaajinta qaanuunka sharciga ee xiriirka ka dhexeeya ilaalinta beeraha.
15 xarumo badan oo taran iyo abuur abuur ah oo laga abuuro Ruushka
Sida uu senatarku cadeeyay, isbadaladu waxay la xidhiidhaan isticmaalka sunta cayayaanka iyo beero-kiimikada, iyagoo tixgalinaya xaalada bacrinta ee dhul beereedyada sahaminta. Sidoo kale, isbeddelo nidaam ayaa lagu sameeyay Sharciga Federaalka "Sharciga Gobolka ee Xaqiijinta bacrimika dhul beereed", fikradihiisa aasaasiga ah, himilooyinkiisa, mowduuca maadada, xuquuqaha iyo waajibaadka adeegsadayaasha dhulka, iyo sidoo kale diiwaangelinta gobolka ee tilmaamayaasha gobolka bacriminta ee dhulalka beeraha ayaa la cayimay.
Masuuliyada samaynta sahanada ciidda iyo sameynta qorshe lagu fulinayo tillaabooyinka taranka dhalmada ee dhul beereedyada waxaa loo xilsaaray hay’adaha miisaaniyadda dowladda ee hoostaga Wasaaradda Beeraha ee Ruushka. Hawlaha qasabka ah waa la fulin doonaa iyadoon la dallacin dadka isticmaala dhulka.
Habka loo dejinayo qorshayaasha loogu talagalay samaynta sahaminta dhul beereed, inta jeer ee sahamada noocaas ah, iyo sidoo kale qorshe lagu cabiro soo saarista bacrinta dhulka waxaa dhisaya Dowlada Faderaalka ee Ruushka, ayuu sheegay guurtida.
Qoraaga qaanuunka ayaa xusey in Russia ay leedahay 9% dhulka dabiiciga ah ee aduunka, waa mid kamid ah afarta dal ee leh kaydka ugu weyn ee dhul beereed. Isla mar ahaantaana, natiijooyinka kormeerka dowladda ee dhulka beeraha ee ay fulisay Wasaaradda Beeraha ee Ruushka waxay muujineysaa in gudaha Ruushka sannadihii ugu dambeeyay, hawlihii xaalufinta dhulka (horumarinta biyaha iyo nabaad-guurka, xaalufka, cusbada, biyo-ku-reebista iyo ifafaalooyin kale oo taban) oo si xawli ah u dardar gelinaya.
Sida laga soo xigtay Sergei Belousov, heerka bacrintu waa mid ka mid ah tilmaamaha ugu muhiimsan ee hufnaanta dhaqaalaha ee warshadaha.
Waxa kale oo uu xusay in qabyo qoraalka cusub ee barnaamijka Gobolka ee ku lug lahaanshaha wax ku oolka ah ee dhulka beeraha ee wareegga iyo horumarinta iskuxirka dhismaha ee Ruushka Ruushku 2021-2030, uu bixinayo ku lug lahaanshaha ugu yaraan 2030 milyan oo hektar oo dhul beereed ah wareegga dhamaadka 12, iyo sidoo kale koror ku yimid aagag dhulka dib loo soo ceshaday 1,6 milyan oo hektar.
Sharciga cusub, Belousov waa la hubaa, inuu noqon doono caawimaad dhab ah hirgelinta barnaamijka Gobolka ee soo socda, aasaaska sameynta siyaasad isticmaalka dhulka caqliga leh iyo tallaabo culus oo ku aaddan horumarinta miyiga, kordhinta heerka nolosha iyo shaqaaleysiinta muwaadiniinta ee miyiga.
Tags: Wasaaradda Beeraha ee Ruushkaisticmaalka sunta cayayaankaisticmaalka macquulka ah ee dhulka